स्वास्थ्य, रोग र अवस्थाहरू
एक खुट्टामा एक असफल ल्यान्डिङ, अचानक परिवर्तनको दिशामा अचानक परिवर्तन, एक खुट्टा सतहमा डिप्रेसनमा बिस्तारै बिस्तारै सबै टाँस्न लिग्नन रुट्चर जस्ता परिणामहरू हुन सक्छ । यद्यपि, बास्केटबल खेलाडीहरू लोचदार पछाडि प्रयोग गर्छन्, साथसाथै पैदल फिक्स गर्न डिजाइन गरिएको एखले, यस्ता चोटहरू असामान्य छैनन्।
लैगामेन्टहरूलाई हानि पुरानो र गम्भीर हुन सक्छ। पहिलो अवस्थामा, पुनःप्राप्ति प्रक्रिया एक हप्तासम्म रहन्छ। यदि लिग्नन भत्किन्छ भने यो रोग गम्भीर हुन्छ। र स्वास्थ्य पुनर्स्थापना गर्न, तपाईंलाई एक महिना भन्दा बढी चाहिन्छ।
चोटको मुख्य लक्षणहरू: चोटको स्थानमा खुट्टाको सूजन , छालाले नीलो रंगको टिप्स प्राप्त गर्दछ, खुट्टालाई कुनै दिशामा सारियो, व्यक्तिले कडा दुखाइको अनुभव गर्दछ, खुट्टाको खुट्टाको खुट्टामा गाह्रो हुन्छ।
यदि पीडित घाइते पैदलमा निर्भर गर्न गाह्रो हुन्छ भने, यसले गम्भीर एंकले चोट लगाउँछ।
लेगामेट को टूटना को उपचार
घाइते हुँदा, तपाईंले तुरुन्तै योग्य विशेषज्ञबाट सल्लाह पाउनुपर्छ। कडा दुखाइको अवस्थामा, तुरुन्तै जूताबाट खुट्टा छोड्नुहोस्, यसलाई प्याकेज सहित प्याकेज सहित राख्नुहोस्, र यसलाई उठाएको प्लेटफार्ममा राख्नुहोस्। यदि चोट (लिगेन्ट टूटना) चोट छ भने, टिप वा तंग पट्टी प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई दुई देखि तीन घण्टासम्म राख्नुहोस्, अन्यथा ट्यूमरले स्वस्थ लिगामेटहरू निस्किनेछ, जुन रक्त परिसंचरणको उल्लङ्घन हुनेछ। ध्यान राख्नुहोस् कि तपाईंका औंलाहरू चिसो हुँदैनन्, सुँगुर र नम्रताको नेतृत्व नगर्नुहोस्। पछाडि हटाउने पछि, प्रत्येक घण्टा बर्फ लोशन बनाउनुहोस्।
जब तपाइँ "लिग्नन टूट्चर" संग निदान गरिएको थियो, त्यहि दिनमा एक इन्सुलेशन इंजेक्शन हुनु पर्छ, अर्को - इंजेक्शन समान समान ट्याब्लेट तयारीकरणको साथ। तर आत्म-औषध नगर्नुहोस्। सबै नियुक्तिहरू एक डाक्टरले गर्नुपर्छ, जसलाई खाताको व्यक्तिगत विशेषताहरू लिनु पर्छ। अधिकतर अवस्थाहरुमा, विरोधी भड़काऊ थेरेपी, अनुशंसित मालिश, मलहरूको प्रयोग "इनोभेजिन", "लिओटोन", "ट्रोक्सीवसिन"। तिनीहरू एक सूजन ठाउँ मा मिश्रित र मर्नु पर्छ, जसबाट हेमतमा को रंग स्पेक्ट्रम धीरे - धीरे एक प्राकृतिक छाया को लागी शुरू हुनेछ।
X-किरणहरूको बारेमा नबिर्सनुहोस्। यसले तपाईंलाई चोटको जटिलता निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ। यदि नीलो र सुँगुर मनाउँदैन भने, कुनै पनि अवस्थामा, microtrauma को लागि ligament तंत्र को शर्त जाँच, जुन बाद आर्थरोजिस जस्तै एक रोग मा विकसित गर्न सक्छन्।
लिगेटी को टूटना स्थानांतरित, र निर्धारित उपचार ले पनि, तपाईंको टखने पुनर्वास थेरेपी को आवश्यकता हो।
घरमा व्यायामको एक चक्र सम्भव छ:
1. निचोड गरेर खुट्टामा आंदोलन र खुट्टामा अचम्मको औंला जोडहरू।
2. आफ्नो औंलाहरूमा खडा गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईंको ह्यान्डलहरूमा डुबाउनुहोस्। यो व्यायामलाई ढिलो गतिमा गर्न सिफारिस गरिन्छ।
3. तपाईंको दिशामा तपाईंको खुट्टा तान्नुहोस् , पहिला यो वजन फ्याँक्दै।
बिस्तारै छिटो दौड, जम्पहरू, खेल अभ्यासहरूमा जान्छ।
महिलाहरु मा क्लिम्याक्स, यसको लक्षणहरू र प्रकारहरू
पुरुषहरु र महिलाहरु मा प्यान्रेटाइटिस को लक्षण र लक्षण। प्यान्रेटाइटिसको उपचारको तरिका
Acorn चाकू (डेमोडक्स folliculorum)। लक्षण, निदान, उपचार
Seborrheic dermatitis को लक्षण र उपचार
भान्सा पीवीसी एप्रन प्यानल - विशेष गरी सामाग्री। भान्सा एप्रन लागि प्लास्टिक प्यानल चयन
एक अनुसन्धान कागज कसरी लेख्न? अनुसन्धान कागजात लागि रोचक विषय
छुट्टी प्रतीकको रूपमा इस्टर मैनबत्ती: बाइबिल कथाहरू र परम्परा
आधुनिक उद्यम मा कम्प्यूटर सूची
समय व्यवस्थापन आमा को लागि souped: रेडियो-सहायक सबै achievers
लिसा डेल Giocondo: जीवनी, रोचक तथ्य। यस चित्रकला "मोना लिसा" लियोनार्डो दा विंची द्वारा
ढोका मा पर्दे। Platten बिजुली
जिगर। व्यंजनहरूको हरेक स्वादको लागि
पीटर Brueghel गरेर "अन्धो को दृष्टान्त"
खरबुजा: कृषि प्रविधि अनुपालन मा बीचको सडक खण्ड मा खेती